Akụkọ - Tuya Smart eji ya na Simons ’Lighting
Dị ka ahịa ọkụ ọkụ mba ụwa na-aga n'ihu na-eto eto, nnabata nnabata nke sistemụ ọkụ ọkụ amamịghe aghọọla isi ọnọdụ na-eme ka uto ahịa a na-adịbeghị anya. Ọ bụrụla ngwa ọkụ ọhụụ kachasị ọhụrụ nke ga-eme ka uto nke ahịa ọkụ ọkụ ụwa zuru ụwa ọnụ n'ime afọ ole na ole sochirinụ.
TuyaSmart / Smart Life-nke dị maka gam akporo na iOS - bụ freeware zuru ụwa ọnụ App dị iche iche ndapụta na ike ọrụ na-enye gị ohere ịchịkwa dị iche iche smart ngwaọrụ maka ụdị dị iche iche n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla. Na TuyaSmart / Smart Life, ndị ọrụ na - ejikwa ngwa ngwa na - elele ngwaọrụ ụlọ ha, na-enwe ọmarịcha ndụ ndụ, ọbụlagodi na ha na-eme njem n'ụwa niile.
Simons na-arụkọ ọrụ na Tuya ma jikọta ngwa na modul ha na ọkụ Simons. Tuya modul agbakwunyere na onye ọkwọ ụgbọ ala, ndị ọrụ nwere ike iji ngwa Tuya chịkwaa ọkụ Simons (otu ma ọ bụ otu njikwa). Ugbu a, simons 'downlight, panel panel, ìhè track, celling light niile nwere ọrụ ọkụ ọkụ.
Tuya Lighting App Ngosi